Alcatel OneTouch Xess, nanandrana ny takelaka 17-inch Alcatel | Androidsis
Alfonso de Frutos | | IFA, hevitra, Takelaka Android
Alcatel dia nisafidy ny mahery kokoa noho ireo fitaovana vaovao natolony tamin'ny fanontana farany an'ny IFA any Berlin. Toy ny nataony Alcatel OneTouch GO Play toy ny Vetson Kira Mihelina Watch Fampihorohoroana, vovoka ary fitaovana mahatohitra rano izy ireo, mifantoka mazava tsara amin'ny profil iray manokana.
Saingy androany tsy te hiresaka aminao momba ny lamina GO an'ny mpamokatra vaovao aho. Ankehitriny dia anjaran'ny Alcatel Onetouch Xess, takelaka 17,3-inch izany dia tsy hamela na iza na iza tsy hiraharaha noho ny famolavolana sy ny fahafaha-manao azy.
1 Alcatel OneTouch Xess, takelaka 17-inch idealy hiara-miasa aminy
2 Ny toetra ara-teknikan'ny Alcatel OneTouch Xess
Alcatel OneTouch Xess, takelaka 17-inch idealy hiara-miasa aminy
Voalohany indrindra, ampahafantaro fa ny singa nizahanay toetra dia andrana fitsapana mba hahitanao fa tsy mandeha tsara loatra izy io. Mazava ho azy, ny fahatsapana voalohany dia tena tsara. Hanombohana azy, ny endrik'ilay Alcatel OneTouch Xess dia tena manintona: atablet vita amin'ny vatana aluminium ary miaraka amin'ireo famaranana izay mahatonga ity fitaovana ity ho famenon-jaza mety indrindra amin'ny trano futurista rehetra.
Ary ny Alcatel OneTouch Xess dia manana fanohanana mahaliana mamela apetraho amin'ny toerana samihafa ny takelaka, fanatrarana ambaratongam-fironana samihafa arakaraka ny fampiasana izay homentsika an'ity mastodon ity. Ary tsy sangisangy ny mastodon hatrizay, na dia tsy te hilaza aminay ny lanjany aza izy ireo dia efa nolazaiko taminareo fa milanja be ny Xess.
Andininy iray hafa miavaka dia ny mpandahateny JBL roa miaraka amin'ny herin'ny 3 watts ary mampanantena fampisehoana tena tsara. Ny fahitana ny volavola, ny habeny ary ireo mpandahateny mahery vaika ireo dia mazava fa ny takelaka Alcatel 17-inch dia mety amin'ny fankafizana atiny multimedia.
Ny toetra ara-teknikan'ny Alcatel OneTouch Xess
Tsy fantatsika ny toetra teknika rehetra amin'ity takelaka vaovao ity, efa nolazaiko anao fa prototypot izy io ary mety misy fiovana, fa ilay singa notsapatsapainay dia nisy efijery namboarin'ilay Tontonana IPS 17.3-inch izay mahatratra ny vahaolana 1920 x 1080 teboka.
Ny lokony dia mazava sy mazava, ary koa manana zoro mitongilana tsara. Amin'ity lafiny ity dia tsy manana zavatra toherina isika. Ny processeur-nao MediaTek MT 8783T valo fototra dia tompon'andraikitra amin'ny fanaovana an'ity tabilao mahaliana ity miaraka amin'ny RAM 2 GB. Raha ny hevitro, somary zara raha mandinika ilay bibidia fa tsy maintsy mihetsika ilay efijery, fa tsy maintsy miandry isika raha toa ka miovaova ny fitaovana entin'ilay kinova farany ny Alcatel.
El Alcatel OneTouch Xess dia manana memo anatiny 32 GB izany dia afaka mivelatra amin'ny alàlan'ny slot misy ny micro SD, ankoatry ny fananana bateria 10.000 mAh. Raha ny momba ny kinovan'ny rafitra fiasan'i Google, fantatray fa manana Android 5.1 L izy na eo ambanin'ny sosona manokana izay ahafahana manararaotra tanteraka ny fahafaha-manao an'ity takelaka mahaliana ity.
Ho hitantsika ny ho fizarana farany saingy azoko lazaina aminao fa ny fahatsapana voalohany navelan'ny Alcatel Xess antsika dia tsy tokony ho tsara kokoa. Mazava ho azy, rehefa dinihina fa a takelaka misy ao an-trano na ampiasaina amin'ny asa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » IFA » Alcatel OneTouch Xess, nanandrana ny takelaka 17-inch Alcatel izahay
Ny bibidia efijery irery dia HD feno, 1920 × 1080, tsy biby izany. Tsy maninona ny haben'ny lehilahy fa famahana io, hahaha.
Javi B. dia hoy izy:
Miaraka amin'ny takelaka vaovao, niavaka ny ALCATEL ONETOUCH. Sarimihetsika goavambe, miaraka amina endri-javatra marobe izay mahatonga azy io ho fitaovana manana fahafaha-manao betsaka. Amin'ireto endri-javatra ireto dia toa tena tsara ny efijery, feno amina processeur tsara sy fahatsiarovana anatiny tsara dia tsara, izay azo zahana amin'ny karatra SD ihany koa.
Valiny tamin'i Javi B.